“OBN guutummaa guutuutti miidiyaa OPDO akka ta’ee .. – Kichuu
HomeAfaan OromooNews“OBN guutummaa guutuutti miidiyaa OPDO akka ta’ee ..
“OBN guutummaa guutuutti miidiyaa OPDO akka ta’ee ..
“OBN guutummaa guutuutti miidiyaa OPDO akka ta’ee fi gaazexeessitoonni bilisa ta’anii akka ogummaan isaanii isaanirraa barbaaduu fi dantaa sabaaf oolutti hojjechuu danda’aa akka hin jirre odeeffannoon mana sanaa nu qaqqabe ifoomse.
Akka odeeffannoon kun saaxiletti erga dhiyeenya kanaatii gulaalaa olaanaan OBN Addisuu Araggaa yoo ta’u, isa jalatti ammoo gaazexeessaa warra OPDO jala sirbu Kaasaahun Gonfaa jedhamu dha. Addisuu fi Kaasaahun waan waraabamee dhufe akka bu’aa OPDOf oolutti keessaa mummuranii tottolchanii tamsaasaaf qopheessu. Geetuu Wayyeesaa fi Taayyee Danda’aas dheengadda Istuudiyoo Finfinneetti gulaalaa turan.
Miidiyaa kana keessatti sabboontotaa fi warra haqaan hojjetaniif hojiin kennamaa hin jiru. Ji’atti waanuma xixiqqoo hojjetanii miindaan kaffalamaafii jira. Kan hojjetu warra ogummaa isaanii siyaasa OPDOtti dabarsanii gurguratan qofa akka ta’etu himama. Sababa kanaan warri haqaan hojjetan qoodamanii ilaalcha addaa ilaalamuu fi hojiin itti xiqqaachuu irraa kan ka’e abdii kutatanii haala gaarii hin taane keessa jiru. Isaan ruuqa keessa kaa’amanii kan sagalee ol kaasee dubbatu warra dantaa dhaabaaf hojjetani dha jedha maddichi. Namoota quuqamaa fi dantaa sabaaf jecha jibbamanii qoodaman keessaa gariin:
1. Lissaanawarq Mogos
2. Gaarummaa Daksiisaa
3. Seefuu Gurmuu
4. Girmaa Gammachuu
5. Zinaabuu Daamxee
6. Zalaalam Boruu
7. Shamsaddiin Huseen
8. Muhiddiin Ahimad
9. Mul’ataa Laggasaa
10. Alamaayyoo Ayyalaa
11. Abdiisaa Dirriibaa
12. Qana’aa Abarraa
13. Abdulaziiz kadiir fa’a.
Warri kun karaa takka siyaasaan karaa biraa ammoo ilaalcha gaarii egeree saba kanaaf jecha hamileen cabee gariin mana jimaa oolu. Sababuma dhiibbaa godhamaa jiruun ji’a lama gidduutti Gaazexeessitoonni 6 hojii dhiisanii deemaniiru. Iyyaa, iyya nuuf dabarsaa!”
(Maddi: Galaanaa Kiisii)
Dargaggeessi Oromoo raayyaa ittisa biyyaatti nuuf dabalamaa hin jiru jedhe.
Hunda irratti waliif galuu baannuus hunda irratti wal hin dhabnu: